Drauger OS inonyepedzera kuva koni pane Linux PC | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pevatambi, kana ini ndinozviona saizvozvo nekuti ini handisi, pane maviri «zvikwata»: iyo inofarira kutamba pamakomputa uye iyo inosarudza kutamba pamakoni. Zvishoma zvandinotamba ini zvandinoda kuita pane zvinonyaradza, asi ndinoziva kuti kune vazhinji vanofarira kuzviita paPC.Pamakomputa, iyo sisitimu inoshanda iyo ine mimwe mitambo inowanikwa iWindows, asi mumakore achangopfuura mimwe uye mimwe mitambo yauya kuLinux, pamwe nekutenda kumapuratifomu akaita seStam. Musanganiswa wezviitiko zviviri izvi ndizvo zvaunoita kunge uri Druger OS, kugovera kutsva.
Sezvakatsanangurwa mu purojekiti webhusaiti, Drauger OS iri desktop operating system «mutambo» iyo inoedza kuburitsa yakasangana yemitambo zviitiko zvePC uye zvinonyaradza papuratifomu yakabatana ichipa yakakwira kumhanya uye yakaderera latency. Iyo desktop yaanoshandisa ndeye Xfce yakagadzirirwa kuti iyo interface ifanane neyeye console, chimwe chinhu chaanowana nekuratidzira yakatwasuka bhaa pakati pechidzitiro.
1 Zvimiro zvinopihwa naDrauger OS
2 Chii uye chii chisiri
3 Iyo ramangwana reDrauger OS
Zvimiro zvinopihwa naDrauger OS
Yakaderera latency kernel.
Xfce graphical nharaunda.
Tsigiro yemutongi weXbox.
Waini, PlayOnLinux, Steam uye Lutris yakaiswa nekumisikidza (unofanirwa kumhanyisa Steam kamwe kuti upedze kuisa).
Kubva paXubuntu LTS (iyo yazvino vhezheni, Drauger 7.4.1 yakavakirwa paXubuntu 18.04).
Parizvino inongowanikwa muChirungu, Chinese neHindi, kunyangwe mimwe mitauro inogona kutorwa pasi.
Mugadziri wayo, Thomas Castleman, anoti akagadzira Drauger OS yekuzadza gaka mune dzakawanda sarudzo dzakasarudzika mukusiiwa kwevhidhiyo mutambo wekuparadzira. Chimwe chezvinangwa zvaCastleman chaive kutora vamwe avo vanoda kubatsira mukusimudzira kwayo. Zvimwe zvinangwa zvinosanganisira kugadzira kugovera ita zvine mutsindo pamwe akavimbika functionality. Kukura nharaunda ine simba kunobatsira Drauger OS kubudirira. Izvi zvichaita kuti zvive nyore kune vashandisi kuwana rutsigiro.
Chii uye chii chisiri
Drauger OS ndeyeLinux-based operating system. Izvo zvinozvisiyanisa kubva kune zvakawanda ndozvavakaisa nekutadza, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuwana, kuisa nekunakidzwa mitambo yemavhidhiyo nekuita kukuru. Mune mamwe mazwi, uye mashandiro uye chinongedzo chakaparadzaniswa, izvo zvatinogoverwa izvi zvinotipa zvakafanana nezvataizowana kana tikamisa zvese zvinodiwa mune chero kumwe kugoverwa kweLinux.
Chii haisi kugoverwa kwekushandiswa kwezuva nezuva. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei timu yayo yekuvandudza isina kusanganisa zvekushandisa zvisina kukodzera kutamba, senge vhidhiyo uye odhiyo yekugadzirisa software kana hofisi suite. Inosanganisira maficha akadai se:
Engranpa faira maneja.
Software Center, kubva patinogona kuisa mamwe mapakeji akadai seVLC kana GIMP.
Iyo ramangwana reDrauger OS
Izvo zvavanotarisira kuzadzisa / kuita mune ramangwana ndezvi:
Enderera mberi. Vagadziri vayo vanogara vachitsvaga vanhu vanoda kubatana pamwe nekusimudzira. Nenzira iyi, kana mumwe munhu akafunga kusiya chirongwa ichi, mumwe munhu anogona kutora chinzvimbo chake.
Ita kuti zvive nyore kushandisa. Imwe yezvinangwa zveDrauger OS ndeyekuti iri nyore kushandisa, intuitive, asi zvakare kuti zvese software uye Hardware "basa".
Rega nharaunda ikure.
Ita kuti zvive nyore kubata nerutsigiro kana kubatsira mukusimudzira kwayo. Kuti vaite izvi, parizvino vane boka re teregiramu, UN Discord server, unogona kuvatumira na kana kutobatana navo ne Twitter y Mastodon.
Nezvinhu zvese zvakatsanangurwa apa, "chinangwa" cheDrauger OS vashandisi vanoda kutamba paLinux, nesimba rayo uye kusasimba, uye kutsvaga iyo zvakanakisa mushandisi ruzivo, zvese mukuita uye mushandisi interface. Mune maonero angu, nzira yakanakisa yekushandisa kugovera iri mune mbiri mbiri, izvo zvinotibvumidza kushandisa komputa nezvose zvayinoita patinenge tichizvida kana kufamba kuburikidza nekugovera pamwe nekuita zvirinani kwemitambo yemavhidhiyo patinenge tichida kunakidzwa apo.
Mamwe ruzivo uye kurodha pasi pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Drauger OS: nyowani yemitambo distro iyo inovavarira kupa iyo console mushandisi ruzivo paLinux
Ini ndinobvumirana newe, ini ndinofarira kutamba pane yangu Xbox Rimwe kutamba paPC yangu (ine Windows 10 yakaiswa). Chikonzero, mitambo yese inoshanda, hapana zvikanganiso, hapana vanobiridzira muInternet, handimbofaniri kugadzirisa hardware yangu (chete kana paine chizvarwa chitsva, uye icho kwandiri chiri € 350 nekuti ndinoibata 2 years, uye ini ndaigona kuenderera ndichipa mazita ezvinobatsira).
Ini ndinofunga zvakanaka kuti pane ma distros anoedza kutevedzera ruzivo rweconsole, zvese zviri mukati memutambi, zviri nyore, uye kuti hazviratidze mabugs. Ini handinzwisise kuti Microsoft haina kubatana sei mukati Windows 10 mashandiro akaita seaya eSteam (Big Mufananidzo) kutevedzera ichi chiri nyore uye chakanakira chiitiko checonsole